Uhlu Lwezakhiwo Ngokuqashwa in Mississauga, Ontario
Hhawu, azikho uhlu lokusesha lokufana. Zama i-Google Search:
Real Estate Listings For Rent in Mississauga, Ontario
UMississauga (lalela) ungumuzi esifundazweni saseCanada i-Ontario nesigodi saseToronto. Itholakala ogwini lweLake Ontario kuMasipala wesiFunda wePeel, emngceleni weToronto empumalanga. Njengoba kunabantu abangama-721,599 njengoba kubalwa abantu ngonyaka ka-2016, iMississauga ingumasipala wesithupha onabantu abaningi eCanada, owesithathu iningi labo e-Ontario, kanti owesibili ngobuningi eGreater Toronto Area.Ukukhula kweMississauga kubangelwa ukusondela kwayo eToronto. Engxenyeni yokugcina yekhulu lama-20, leli dolobha laheha inani labantu abanamasiko ahlukahlukene futhi lakha isifunda samabhizinisi esimaphakathi. Kuyikhaya lesikhumulo sezindiza i-Toronto Pearson International Airport, isikhumulo sezindiza esiphambili kunazo zonke eCanada, kanye nendlunkulu yezinhlangano eziningi zaseCanada nezinhlangano zomhlaba wonke.